Nezvedu - Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd.
Jiangxi Checheng Trading Co, Ltd. yakavambwa muna 2016, isu tiri nyanzvi inogadzira mota polishers uye zvigadzirwa zvekuchengetedza mota, zvinosanganisa budiriro uye kugadzirwa, kutengesa, uye kutengeserana pamwechete.
Mushure memakore anopfuura 4+ ekuenderera mberi nekuvandudza uye zvigadzirwa, zvigadzirwa zvedu zvakatumirwa kuEurope, America, Southeast Asia, Africa, Middle East, nezvimwe. Ivo vanoverengerwa zvakanyanya nevatengi nevakwikwidzi mukati meiyo imwechete bhizinesi mutsara.
JIANGXI CHECHENG iri nyanzvi R & D, kugadzirwa, uye yokutengesa kuti hunyambiri chiito makorari michina, muhombe motokari chakuvhe, uye Mini muchina polisher. Isu takazvimiririra takagadzira uye takaburitsa michina yakasiyana-siyana yekukorobha, senge NEW Super Palm Series DA polishers, Best Sell X-Bot akateedzana DA polishers, DF akateedzana DA polishers, rotary polishers, uye mini polishers. Zvigadzirwa zvedu zvakawanikwa CE uye RoHS zvitupa.
Semugadziri, isu tine yedu fekitori iri muYongkang, Zhejiang uko kunozivikanwa nemuchina-wekuvaka indasitiri, ese maR & D uye kugadzirwa kunoitika pano. Iyo technical Director, zvakare ari mugovani weChecheng, ane makore gumi nemana ekuberekwa muR & D uye kugadzirwa kwemapolishi emota. Nekombinoroji yake yakakura uye nzwisiso yezvigadzirwa nemisika, michina yedu yakagamuchirwa zvakanaka nevatengi uye inozivikanwa nemusika munguva pfupi.
Isu tine timu yehunyanzvi uye yekushandira pamwe kuti usangane nezvinodiwa. Chikwata chedu chiri kusanganisira vatungamiriri vanoona zviri kure, timu ine ruzivo rweR & D uye mahunyanzvi, timu yekutengesa ine hunyanzvi, vashandi vane hunyanzvi, uye vashandi vekudzora mhando.
Isu tinowanikwa kuti tikuratidze chigadzirwa chedu uye tinokutungamira mune sarudzo yezvigadzirwa zvinokodzera zvaunoda.
1. Kune vatengi vemhando, tinogona kupa dhizaini dhizaini, R&D, uye kuvhura kweforoma, yakasimba rutsigiro rwehunyanzvi, uye yakazara sevhisi system.
2.Kwevatengesi, vatengesi uye vatengi vanozvishandira, isu tine huwandu hwakakwana, mhinduro nekukurumidza, kudonhedza-kutumira, kuendesa nekukurumidza, kuchengetedza-kwekutengesa-kutengesa, hapana mari uye kumanikidza kwekuverenga.
Checheng yechokwadi inogona kupa nyanzvi uye yekutanga-kirasi masevhisi sekuenderana nevatengi zvikumbiro.
KUSIMBISA & KUKWANISA
Chinangwa chedu ndechekupa zvigadzirwa zvine hunyanzvi uye masevhisi akanakisa pamitengo inonzwisisika. Isu hope kushandira pamwe nevamwe vatengi kwekuwirirana kukura uye mabhenefiti. Vatengi vanogamuchirwa kuti utibata nesu!